Casharka Anaconda: Python ee Barashada Mashiinka iyo Sayniska Xogta - Ikkaro
Inicio >> Software >> Linux >> Tababarka Anaconda: Waa maxay, sida loo rakibo iyo sida loo isticmaalo
Muddo ka hor ayaan rakibay Keras iyo TensorFlow Dareen la'aan laakiin xalka Anaconda wuxuu umuuqdaa mid aad ufudud badan oo waxtar badan
Sidoo kale waa a ikhtiyaar weyn oo lagu rakibo Python nidaamkayaga hawlgalka maktabadaha aan u baahanahay oo aan ku koobno ​​mashaariicda jawi kala duwan.
Waxaan si gaar ah ugu tijaabinayaa qoraallada qaarkood si aan u maareeyo csv waaweyn oo shaqo ah oo aan ugu baahdo NumPy iyo Pandas. Oo hadda waxaan isku dayi doonaa Tensorflow iyo wax kale ;-)
Waxa aan ku arko tirada baakadaha aan arko ayaa ah inaysan ku koobnayn falanqaynta xogta maxaa yeelay waxaan rakibi karnaa boqolaal plugins (maktabado) u heellan horumarinta webka ama xoqidda sida Scrappy. Marka waxaan la soconaa casharka guud ee rakibaadda iyo abuurista bay'ado waana baari doonnaa codsiyada aan rakibi karno.
Anaconda vs Conda
Hoosaad. Ha wareerin Anaconda, oo ah qaybta noo saamaxaysa inaan isticmaalno maktabado badan iyo falanqaynta xogta, Sayniska Xogta iyo barnaamijyada mashiinka mashiinka ee Conda, oo ah maamulaha xirmada Anaconda iyo jawiga dalwaddii.
Sida loo rakibo Anaconda Ubuntu
Anaconda waxaa lagu rakibi karaa Microsoft, MacOs iyo Linux. Waxaan kuu sheegi doonaa wixii ku soo maray Ubuntu.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loogu rakibo Anaconda gudaha Ubuntu, midka aan ugu jeclahay waa inaan aado bogga rasmiga ah iyo download ah .sh. Raadi nidaamkaaga qalliinka iyo nooca aad xiiseyneyso
Haddii aad bilowdo waxaan kugula talinayaa inaad doorato nooca 3.7 in 2.7 ay duugoobi doonto dhawr sano gudahood.
Haddii aad u soo degsato .sh-ka Linux sida aniga oo kale ah, waa inaad furtaa qunsulka ama xarunta, oo aad tagtaa tusaha halka uu ku yaal, kiiskeyga Downloads
Xusuusnow in khaladka ugu badan ee dadku dhibaatada ku qabaan uu yahay inuusan galin galka ama galka saxda ah
Sadarka ugu horeeya ayaynu ku galaynaa galka soo degsashada, midka labaadna «ls» wuxuu ku taxay faylalka jira oo markaa waan arki karnaa magaca .sh marka saddexaadna waxaan fulinaa .sh aan nidhaa waa sida Windows .exe.
Oo iyana way bilaabmi doontaa. Aqbal shuruudaha shatiga softiweerka ka dibna waxay ku weydiin doontaa inaad rabto inaad rakibto Studio Visual Code Studio. Haa ayaan idhi.
Talaabooyinka ka dib rakibida Anaconda
Waa inaad ka baxdaa iibintaas terminal-ka isbeddellada si ay u shaqeeyaan. Markaa waxaan xireynaa terminaalka, dib ayaan u fureynaa waana qornaa
Tani waxay fureysaa interface garaaf ah oo leh qaab biraawsar oo noo oggolaan doona inaan rakibno oo aan dhaqaajino xirmooyin kala duwan, in kasta oo aan sidoo kale wax walba ka qaban karno qunsulka.
Marka la rakibo waxaan hubin doonaa in wax waliba sax yihiin. taas awgeed waan arki doonaa nooca aan ku rakibnay
Haddii wax walba hagaagaan waxay noo soo celin doontaa heer sare sida Xasuuqa 4.6.4 Haddii qalad yimaado, waa inaan aragnaa waxa ay noo sheegayso inaan xallino, dib u dhigno, iwm.
Haddii aad hadda rakibtay waa inaad eegtaa haddii wax cusboonaysiin ah uu ku jiro conda
Tani waxay isbarbar dhig ku samaynaysaa nooca aan haysanno iyo midka la heli karo haddii wax cusubi jiraanna way na weydiin doonaan
Waxaan galnay «iyo» haa oo waan galeynaa
Ku abuur jawi shaqo kumbuyuutar Conda
Mashruuc kasta oo aan qabanno waxaan ku haysan karnaa deegaan u gaar ah, sidan ayaan uga fogaaneynaa dhibaatooyinka ku tiirsanaanta xirmada, iwm.
Si loo abuuro jawi muuqaal ah, waxaan u wici doonaa isbarbardhigaha waxaan ku qoreynaa terminaalka:
Halkee isbarbardhigaha waa magaca jawiga dalwaddii iyo Python = 3.7 waa xirmada aan dooneyno inay rakibto.
Waxaan ku hawlgelineynaa
Oo annaguna waanu barkinta nahay
Waxaan ku xaqiijineynaa jawiga dalwaddii
Tani waxay ina tusi doontaa jawiga aan haysanno, waxay soo celin doontaa wax la mid ah
salku waa xidid, xiddigkuna wuxuu ina tusayaa kii aan hawlgalinay.
Waxaa sidoo kale jira hal shay oo xusid mudan. Markaad ka shaqeyneyso jawiga qunsuliyada, magaca waxaa lagu hagaajinayaa qawska isla markiiba, si aan marwalba u ogaano halka aan joogno
Amarada xiisaha badan:
waxaan raadin karnaa codsiyo aan ku rakibno. Bal ka fikir in aan doonayo inaan rakibo Keras, maxaa yeelay marka hore waxaan eegaa haddii arjiga la heli karo iyo noocyada jira
Sidaan u arko inay durba tallaabo tahay in la rakibo
Iyo inaan aragno wax kasta oo aan ku rakibnay deegaankeena horumarineed waan isticmaali doonaa
Ku xir xirmooyinka pkgs conda
Waa kuwan xulashooyinka xiisaha leh. Taasi waxay naga caawin doontaa inaan ku xirno jawigeenna muuqaalka leh barnaamijyada aan u baahan nahay inaan ku shaqeyno.
Ku rakib baakadaha
Waxaa jira amarro aad u gaar ah. Ku rakibida xirmo jawi gaar ah. Tusaale ahaan Keras, jawigayga cusub ee la abuuray isbarbardhigaha
Haddii aynaan ku darin –magacaaga isbarbardhigaha wuxuu ku rakibayaa deegaanka aan ku firfircoon nahay waqtigaas.
Waxaan ku rakibi karnaa baakado badan isla waqtigaas (keras iyo scrappy) leh
Laakiin laguma talinayo in laga fogaado dhibaatooyinka ku tiirsanaanta.
Ugu dambeyntii, waxaan dooran karnaa nooca gaarka ah ee aan dooneyno inaan rakibno haddii aan xiiseyneyno sabab kasta ha noqotee
Ku rakib xirmooyinka non-Conda
Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali doonnaa beeb
Waxaa jira fursado kala duwan. Ku cusbooneysii xirmo gaar ah
Iyo inaad cusbooneysiiso dhammaan xirmooyinka meta ee Anaconda
Tirtir xirmooyinka jawiga la siiyay. Tusaale ahaan Keras ka soo jeeda deegaanka isbarbardhigaha
Hadaan rabno inaan tirtirno deegaanka aan kujirno
Baakado badan ayaa la tirtiri karaa isla waqtigaas
Waxaana lagugula talinayaa inaad hubiso xirmooyinka si aad u ogaato haddii si sax ah looga fogeeyay
Aniga ahaan tani waa aasaasiga, haddii aad rabto inaad si qoto dheer u sii socoto halkan waxaad leedahay rasmiga ah ee buugga konda (Ingiriisiga)
Waxaan ka tagnay a xaashida khiyaamada by Conda rasmi ah, oo leh amarrada ugu waaweyn ee isticmaalka degdegga ah ee qaybinta ah.
Socod ku socod ah jawiga garaafka ee Anaconda
Waxaas oo dhan oo aan ku sameyneyno terminaalka waxaanna ku sameyn karnaa garaaf ahaan annaga oo ah interface interface.
Si loo bilaabo qaybinta, waxaan marka hore u baahanahay inaan helno jawiga aasaasiga ah (xididka) conda firfircoon
Tanna waxaan ku wici karnaa Anaconda. Haddii kale, ma bilaabaneyso
Ma aragtaa, halkan waxaan ka helaynaa mashruuca aasaasiga ah, kaas oo xidid ah ka dibna deegaannada aad abuureyso oo aniga kiiskeygu ahaa isbarbardhigaha.
Way fiicantahay inaad ku daawato fiidiyow
Iyo aqoonta aan ku helnay maqaalka oo dhan waxaan ku bilaabi karnaa inaan la dhexqaadno oo aan la shaashado maktabado badan iyo codsiyo.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, ka tag faallo waxaanan isku dayi doonaa inaan ku caawiyo
Categories Linux, Barashada Mashiinka, Software Tigidhka tigidhka
1 Anaconda vs Conda
2 Sida loo rakibo Anaconda Ubuntu
3 Talaabooyinka ka dib rakibida Anaconda
4 Ku abuur jawi shaqo kumbuyuutar Conda
5 Ku xir xirmooyinka pkgs conda
5.1 Ku rakib baakadaha
5.2 Ku rakib xirmooyinka non-Conda
5.3 Cusboonaysii xirmooyinka
5.4 Tirtir xirmooyinka
6 Socod ku socod ah jawiga garaafka ee Anaconda